Indlela Yokuphumelela Kuqhawulo-mtshato Olubuhlungu | IBezzia
UMaria Jose Roldan | 11/10/2021 22:37 | Ubudlelwane
Uqhawulo-mtshato lunokufana nokufa, Kuya kufuneka uhambe ngenkqubo yokulila ukoyisa ingxaki enjalo. Kuvaleliso lokugqibela kubomi bamaphupha kunye nekamva kunye nomntu omthandayo. Kungenxa yoko le nto uqhawulo-mtshato lunokuba lusizi lokwenene kubantu abaninzi.
Kwinqaku elilandelayo siza kukuxelela indlela yokoyisa intlungu yoqhawulo-mtshato kwaye ukwazi ukuqala ubomi obutsha ngale ndlela.
Kuya kufuneka uqale kwisiseko, ukuba akukho luqhawulo mtshato lunye kwaye izizathu zinokuba ninzi kwaye zahluka. Kwimeko yokwenza isigqibo esinzima ngolu hlobo, kulungile ukulandela uthotho lweengcebiso ezenza ukuba inkqubo yokwahlukana nomntu omthandayo inyamezeleke ngakumbi:
Okokuqala nokubaluleke kakhulu kukwamkela uqhawulo-mtshato. Kuqhelekile kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba iindleko kuqala, kuba oko kuthetha ukuyeka amaphupha kunye nezicwangciso ezingasayi kwenziwa. Ukuba le nto ayilungisekanga, akunamsebenzi ukungayamkeli inyani. Nangona kunokuba nzima kwaye kube buhlungu, kungcono ukwamkela uqhawulo mtshato kwaye ungazenzi izinto nzima nangakumbi.
Umntu akufuneki azenze ikheswa kwaye azame ukwakha ubomi bakhe. Ukujongana nala maxesha anzima, kuyacetyiswa ukuba uzingqonge nabantu abasondeleyo ukuze ndikwazi ukuveza iimvakalelo ezahlukeneyo kunye neemvakalelo.
Nangona kungenakwenzeka, kubalulekile ukujonga phambili kwaye ndibone ubomi ngethemba elikhulu. Ngokuhamba kwexesha, amaphupha amatsha kunye nezicwangciso ziya kuvela nokuba umntu omthandayo akasekho.
Kuhle ukufunda kwiimpazamo ezenziweyo ukuze ubonwabele ubomi kwakhona. Amava sisidanga kwaye kuya kufuneka ufumane icala elifanelekileyo kuqhawulo mtshato.
Ukonwaba awudingi ukuba neqabane oza kwabelana ngalo ngale mvakalelo. Kuya kufuneka uyazi ukuba ungafunda njani ukuba wedwa kwaye ungaxhomekeki komnye umntu xa kufikwa kulonwabo.
Ukuba ngaphandle kwako konke okuthethwayo, awungekhe uluqhawule uqhawulo-mtshato, ayisiyonto imbi ukufuna uncedo kwingcali. Umntu onje ngengqondo unokukunceda ulawule iimvakalelo ezahlukeneyo. Ngexesha lokukwazi ukoyisa umzuzu onzima njengoqhawulo mtshato, kubalulekile ukwazi ukuba ungazihambisa njani iimvakalelo ezahlukeneyo ngalo lonke ixesha.
Ngamafutshane, Akululanga okanye kulula ukudlula kuqhawulo-mtshato lomntu uthandana naye. Kubalulekile ukwazi isizathu sokuba kutheni ubudlelwane buqhekeka kwaye ukusuka apha ukuya phambili, yenza konke okusemandleni ukuze inkqubo yokulila ingathathi ixesha elide. Baninzi abantu abaguqula uqhawulo-mtshato lube ngumonzakalo wokwenene ekunzima ukuphuma kuwo. Ngamanye amaxesha, umntu akakwazi ukoyisa uqhawulo-mtshato eyedwa kwaye bayanyanzeleka ukuba bafune uncedo kwiingcali ukubanceda boyise umzuzu onzima njengokuqhekeka neqabane labo ngonaphakade.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Ungaluthamba njani uqhawulo-mtshato olubuhlungu